Kolontsaina - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Famintinana ny asa amin'ny taona antonony & fitsangantsanganana 2020.7
Famintinana ny asa amin'ny taona antonony no hatao isan-taona. Ny atiny ankapobeny amin'ny famintinana dia momba ny fanombanana sy drafitra ary sosokevitra. Ny tombony lehibe indrindra amin'ny famintinana dia ny orinasa hanangona sosokevitra be dia be avy amin'ny mpiasa ary avy eo hampihatra.
Fihaonana natao tao amin'ny Tendrombohitra Qingcheng malaza any Chengdu tamin'ity indray mitoraka ity. Aorian'ny fivoriana, izahay nanao fitsangatsanganana an-tany efitra ary nankafy fotoana nahafinaritra tokoa.
Mankalazà ny taona vaovao sinoa 2020.12
Mba hankalazana ny taom-baovao sinoa 2020, nahazo fanomezana avy tamin'ny orinasa izahay rehetra, ary nahazo valisoa ihany koa ireo mpiara-miasa miavaka. XY Towers dia nisaotra ny mpiasa rehetra tamin'ny asa mafy nataony ary niandrandra ny ho avy mamiratra miaraka amin'ny 2021.
Ny fahafantarana ny mpiara-miasa aminay Changquan Zhang, izay miasa ao amin'ny sampana mpamokatra dia nofoanana ary nitaky fandaniana ara-pahasalamana lafo ny fitsaboana simika, dia nanolotra tolo-kevitra fanomezana ho an'ny mpiasa rehetra ny sendikan'ny mpiasa XY tower. Nandritra ny fotoana kelikely, maro amin'ireo mpiara-miasa amin'ilay orinasa no nandray anjara tamin'ity hetsika feno fitiavana ity. Hatramin'ny 3 Febroary 2018, vola mitentina 1,6 $ no natambatra .Nafindra avy hatrany tany amin'i Changquan Zhang avy amin'ny firaisan'ny orinasa io fanomezana io.